Mastiff: Yazi izici nokunakekelwa kwalolu hlobo | Izinja Umhlaba
Lolu hlobo lubhekwa njengolungafani nobuchule balo obunesibindi nothando kubanikazi balo, luhle kakhulu njengenja egadayo, ngakho-ke esetshenziswa ukugcina izindawo ezinkulu. Ukuba wusizo kwayo kusuka eqinisweni lokuthi kunconyelwa kakhulu njengenja ukuzigcina unenkampani ngenxa yezimpawu zayo.
Phakathi namakhulu eminyaka, umastiff uhambisane nemihlambi yezimvu ukuvikela izinkomo ekuhlaselweni yimpisi. Ingabe uyazifela ngalolu hlobo? Ngemuva kwalokho qhubeka ufunda le ndatshana ukuthola ngezici ezibaluleke kakhulu ezihlobene nalolu daba.
Njengoba sesishilo, umsebenzi wawo uvikele ngokuphelele. Kuyaziwa nangamanye amagama kuya ngesifunda sendawo lapho itholakala khona, elinye lazo liyinja yezinkomo.
Kuyathakazelisa ukuthi wazi okuthile ngomlando walo mjaho oncomekayo nokuthi ngowe-1981 i-Spanish Association of the Inja yaseSpain Mastiff.
Le nhlangano ibinombono wokuhlela i- Uhlelo lokuqoqa imininingwane ngalolu hlobo ezikhathini zakudala. Kungakho-ke adwebe iphethini entsha ngenhloso yokuthola yonke imininingwane ebhekiswe futhi efanele izinja ezindala zezinkomo.
Banemfanelo ebachazayo futhi ebanikeza ubunikazi, okungukuthi, lokho Ziyizinhlobo ezingasetshenziselwa zombili izilwane ezifuywayo nezinja zokuqapha. A.
Ngezansi sizofingqa ezinye zezimfanelo nezimfanelo ezenza zikhange ngempela:
Kubonakala ngokuba yinja enkulu, enamandla kakhulu, enamandla amakhulu futhi enemisipha eminingi. Kuthiwa ngalokhu ukuthi Luhlobo olukhulu kunazo zonke olwabonwa eSpain.
Kuwumjaho ongathembeki kakhulu, wokuqina okukhulu phambi kwabantu ongabazi futhi uqiniseke kakhulu ngaye. Uboya baso buminyene futhi bunohlobo lwezinwele ezinoboya obunikeza ukubonakala kwengubo yangaphansi, elahlekile ehlobo.
Ngokuqondene nombala wazo, okumhlophe, okumnyama kanye ne-brindle kuvame kakhulu. Ubude bazo bungu-60 no-80 cm kuya ngokuthi kungowesilisa noma owesifazane. Ububanzi besisindo buphakathi kwama-40 no-70 kilos yize kungenzeka afinyelele kuma-90 kg.
Zivame ukusetshenziselwa ukunakekela imfuyo kanye namapulazi nezakhiwo. Njengenjwayelo, zilinganisiwe impela, ezibachaza njengezinja ezinhle zomngane. Isilinganiso sobude besikhathi sokuphila siphakathi kweminyaka eyisishiyagalombili neyishumi futhi maqondana nemvelo kungashiwo ukuthi ingena kahle emindenini, endaweni yasemakhaya, emadlelweni kanye / noma ekuqapheni.
Kungashiwo ngaye ukuthi ungomunye wezinhlobo ezinkulu kunazo zonke iSpain ezinazo. Kukhona ukungabaza ngemvelaphi nokuvela kwayo, kepha kunemininingwane yomlando esondelene neqiniso; weza kuleli lizwe ngabaseFenike kanye namaCelt futhi zazisetshenziswa amaRoma njengezinja ezilwayo.
Okungangabazeki ukuthi ngeNkathi Ephakathi ukusizakala kwabo bekugxilwe njengabagcini bemfuyo. Ngokuvamile, izimfanelo zayo yilezo ze- zala zishesha kakhulu, ziqinile, futhi ziyakwazi ukuvikela imihlambi kwezinye izilwane uma uzizwa usongelwa.
Inja yaseMastiff yaseSpain inamandla, inkulu futhi inamandla amaningi. Imilenze yayo iyashesha, inzima futhi inamandla. Inekhanda elikhulu kakhulu, izindlebe ezi-floppy kanti isikhumba sobuso baso silenga phezu kwamehlo nezihlathi.
Umzimba wonke umbozwe uboya obukhulu kakhulu. Ngokuqondene nombala, okuvame kakhulu yilawa imibala eqinile kanye ne-brindle.
Ukugcinwa kwayo kulula futhi kudinga ukuzivocavoca okuningi, ngakho-ke kunconywa ukuhlala endlini enkulu. Ungakunaki ukukhathazeka kwakhe ngenxa yokuntuleka kokuvivinya umzimba.
Ukuxubha kunconywa ukususa yonke imikhondo yokungcola nezinwele ezifile. Hlola emva kokuphuma ngakunye kwamazeze nemikhaza futhi uma umgeza unakekele izindlebe zakhe.
Ukuba uhlobo losayizi oqinile, ibheka izifo ezifana ne-hip dysplasia. Kufanele udle ukudla okunomsoco, enezakhi zomzimba ezibalulekile ukuze kugayeke kahle; anakekele imigomo yakhe yokugoma nokuthi uhambela udokotela wezilwane njalo.
Kufanele futhi uwususe umusi kuze kube sezingeni lapho uchwepheshe ekuncoma khona. Amagciwane adla ingxenye yomzimba wakho, abangele ukulimala okuqondile okungaholela kuhudo, ukunciphisa umzimba, ukuhlanza ngisho ithumbu lesisu lingamiswa.
Kumele ubheke kuphela okulungile futhi ukukhipha izikelemu okwanele nezidakamizwa eziklanyelwe izilwane ezifuywayo.
Lolu hlobo ludinga ukungeniswa okuphezulu kwekhalori ngenxa yobukhulu balo obukhulu, kanye nokuvivinya umzimba okuhambisana nesimo salo esiqinile, ukunakekelwa kwayo kuyinto eza kuqala futhi zonke izincomo eziqondile kufanele zilandelwe.
Kuya ngokuthi isewumdlwane yini, kunconywa ukuthi ukudla kwayo kube izingxenye ezincane futhi ngezikhathi ezahlukene okungenani kathathu ngosuku, hhayi lapho isilwane sifuna, ukumjwayela ukuyala emikhubeni yakhe yokudla.
Ngokufanayo nangaphakathi kweziphakamiso kuhle ukuthi udle ama-antioxidants, njengoba kubalulekile ukugcina ijazi lisesimweni esihle. Ngendlela efanayo, mnikeze wonke lawo maprotheni nokudla okuvikela amalunga akhe.
Njengoba benenkinga yokukhuluphala, kufanele ubheke isisindo sabo nokunye ukungalingani kokudla. Futhi qapha ukubonisana kwakho nodokotela, uzokunikeza ukuqondiswa okungcono kwe- ukuthi uMastiff uthuthuka kanjani.
Ungacabangi ukuyivocavoca noma ukuyithatha lapho uhamba khona ngemuva kokudla, kungakuhle ukuthi ulinde amahora aqondile ukuze ikwazi ukugaya kahle ukudla, ngoba uma ingakwenzi kungadala izinkinga.
Kufanele umkhiphele ngaphandle kohambo okungenani izikhathi eziningana ngosuku, yenzelwe impilo yakho nenhlalakahle yomzimba. Ngingakuqinisekisa ukuthi ngalokhu uzolawula isisindo nokugaya okuhle kwenja yakho.
Mkhiphe ezifweni, setha uhlelo lokugoma nodokotela wakho wezilwane. Lolu hlobo ludinga ukunakwa okuningi, ukuzizwa uwedwa noma ukunganikezwa uthando kungadala ukuthi lusabele kabi futhi kungaholela ezinkingeni ezingokwengqondo.
Enye yezinkinga zezempilo ezethulwe kulo magazini yi i-hip dysplasia, okungakulethela izinhlungu futhi ungahle uxhuge. Usuvele uyazi ukuthi ungayinciphisa ngokuzivocavoca umzimba, ezemidlalo, ukudla nokuhambahamba.
Qaphela izinkinga zokusonteka esiswini. Uma unakekela ukuthi ukudla okudliwayo kusezingxenyeni ezincane kaningana ngosuku, uzogcina impilo yabo nenhlalakahle yabo isesimweni esifanele.
Ngakho-ke iMastiff yaseSpain Yinja enkulu, enamandla, ethembekile kakhulu kumakhosi ayo futhi ngithanda kakhulu izingane.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izinja zizala » Mastiff